Ma waxaad ku dhibtay Noobs? | Martech Zone
Faa'iidooyinka mid ka mid ah (dadka qaarkiis waxay u haystaan ​​inkaar) in farsamo ahaan la qabatimay, si xeel-dheerna u ogaatay, ayaa ah in dadka kale oo dhami ay markasta kaa codsanayaan caawimaad. Saaxiibkeyga wanaagsan iyo saaxiibkey Hoosier, Patric aka Mudane Noobie, wuxuu si buuxda diyaar ugu yahay inuu ka qaado culayskan garbahaaga! Patric wuxuu lahaa degel sii kordhaya, Noobie, sanadkii la soo dhaafay laakiin waa qaab cusub oo dib loo habeeyay oo soo bandhigiddu waa wax cajiib ah!
Noobie, Inc. wuxuu leeyahay qaamuus, maqal iyo muuqaal fiidiyoow, maqaallo iyo xitaa dhacdooyin. Weligaa ha isweydiin waxa faraqa u dhexeeya iPhone iyo iPod Touch yihiin? Noobie, Inc. ayaa leh jawaabaha!
Sannado badan ka hor, waxaan haystay degel la yiraahdo "Caawinta Gacanta" oo aan ku iibiyay xoogaa yar oo isbeddel ah. Waxay tuureen xagasha farsamada waxayna noqotay goob kaa caawineysa inaad joojiso sigaar cabista. Noobie, Inc. waa waxa aan rajaynayay in Caawinta Gacantu noqoto. Hambalyo Patric!
Kahor intaadan ka tegin boostadan - hubi inaad email ugu dirto waalidkaa, walaalahaa, walaalahaa iyo dadka kula shaqeeyaba xiriiriye Noobie, Inc.. Waxa kale oo aad ku biiri kartaa Waa Noo Blog!
U oggolow Patric inuu daryeelo kuwa cusub ee noloshaada!
Tags: ilaha macluumaadkaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkafariin aamin ahis-adeegidkaaliyaha dalwaddiiiskaa wax u qabso
Waa maxay talo soo jeedin weyn, mahadsanid
Taas waan la wadaagi doonaa daawadayaashayda.
Waad ku mahadsan tahay tixraaca weyn. Waa goob weyn oo loogu talagalay qof walba runtii maadaama marwalba ay jirto tiknoolajiyad cusub oo soo degaysa pike-ka oo aan u baahanahay caawimaad xagga barashada.